शालु गौतम। डान्सर, मोडेल, गायिका र ब्यूटिसियन पनि हुन्। खास गरि बेली-डान्समा पारंगत छिन्। फेसबुकमा उनको फलोअरको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ। उनको नेपालमा भन्दा यूरोपमा रहेका नेपालीहरुविच चर्चा ज्यादा छ। पोर्चुगलमा बिदेशीहरुलाई बेली-डान्स सिकाउने शालुले केहि गीतमा मोडेलीङ गरेकि छिन् भने केहि गीत आँफैले पनि गाएकि छिन्। केहि दिनअघि काठ्माण्डौंमा भेटिएकि शालुसंग मन्डला अनलाईन रेडियोको जम्काभेट।
काठ्माण्डौं कहिले आउनुभयो?
६–७ महिनै भैसक्यो। अलिअलि काम पनि भएकोले बसाई लम्बिईरहेको छ।
अब यतै बस्नुहुन्छ कि फेरि पोर्चुगल फर्किने विचार छ?
कहाँ नफर्किनु नि, फर्किने हो। तर कहिले फर्किने भन्ने तय भैसकेको छैन। नेपालमा केहि व्यवसायिक काम शुरु गरौं भन्ने थियो, तर वातावरण नै भनेजस्तो पाईन। अब बिस्तारै फर्कनुपर्ला।
ग्लामर क्षेत्रमा यतिविघ्न रुचि भएको मान्छे यतै स्ट्रगल गर्न छाडेर किन बिदेशिनुभएको त?
हैन, यस्तो हो– खासमा म टुरिज्मको स्टुडेन्ट हुँ। अध्ययनकै लागि बिदेसिएँ। यो ग्लामरतिरको शौख त उतै गएपछि पलाएको हो। मैले बेली-डान्स सिकेको पनि उतै हो र सिकाउन पनि उतै थालें। त्यस्तै म नेल-आर्ट ईन्ट्रक्टर पनि हुँ। मलाई यूरोपमा चिन्नेहरुले नेलआर्ट ईन्सट्रक्टरकै रुपमा चिन्छन्। बेली डान्सले मेरो परिचयको दायरा बढाँउदै लगेकोचाँहि भन्न सक्नुहुन्छ।
बेली-डान्स सिकेर जानिने कुरा हो कि गडगिफ्टेड?
बिल्कुलै सिकेर जानिने कुरा हो। जन्मेपछि हिंड्न, खान त सिक्नुपर्छ। डान्सको कुरामा पनि १२–१५ दिन प्राक्टिस गर्ने हो भने फरक परिहाल्छ। तर अब एक्पर्ट नै हुन त दह्रै साधना चाहिहाल्छ नि!
बिदेशमा बसेर कलाक्षेत्रमा क्रियाशिल हुन सजिलो-अप्ठ्यारो के छ?
दुबै छ। ईन्कमका हिसाबले नेपाली कलाकारहरुलाई बिदेश भनेको स्वर्गै हो। तर हामी त्यहिं बस्नेलाईचाँहि छिमेकि देशहरुमा कार्यक्रम हुँदा पनि टाईम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। परिश्रमिक चित्तबुझ्दो भयो भने गईन्छ हैन भने गईन्न।
तपाँईको प्रस्तुतीलाई लिएर बिदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट कस्तो प्रतिकृया पाउनुहुन्छ?
राम्रै भन्नुहुन्छ। विशेषगरि बेली-डान्सको लागि प्रसंसा पाँउछु। तर गायनचाँहि बिशुद्ध शौख हो मेरो। हुन त आफ्नो गीतको म्यूजिक भिडियो पनि तयार पारेको छु। तैपनि गीत-संगित मेरो पेशाचाँहि होईन। र, हुँदैन पनि!
एकैछिन नेपालतिरको कुरा गरौं, काठ्माण्डौंमा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ?
त्यस्तो बिशेष त केहि छैन। केहि ब्यूटि पेजेन्टहरुमा ब्यूटिसम्बन्धी ईन्ट्रक्टरको रुपमा काम गरिरहेको छु। न्यू कमरहरुलाई ईनर र आउटर ब्यूटिको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ भने तालिम दिईरहेकि छु। त्यै हो।
संगित, नृत्य वा अभिनय तपाँईको प्राथमिकताको बिषय के हो?
हेर्नुस् मान्छे कि भोकले लाग्छ रे कि शोखले लाग्छ रे। पर्यटन ब्यवसाय र नेल आर्ट मेरो अध्ययनको बिषय हो, कामको बिषय हो। तर ग्ल्यामवर्ल्ड मेरो लागि बिशुद्ध शोखको क्षेत्र हो। तैपनि बेलि डान्सले मेरो पहिचानलाई बिस्तार गर्न मद्दत गरिरहेको छ। सन्तुष्ट नै छु।
धेरै ग्ल्यामरस खालका फोटोसुट गराउनुभएको रहेछ, फलोअरहरु धेरै नै होलान् है?
हा...हा...हा...छन् टन्नै। म्यासेजहरुले ईन्बक्स भरिराख्या' हुन्छ। रिप्लाई गर्नै भ्याँउदिन। त्यसैले छुच्ची पो भन्छन् त मान्छेहरु मलाई!
अंगप्रदर्शनको सवालमा कला र अस्लिलताको सिमा कहाँ गएर छुट्टिन्छ?
तपाँई मेरो केहि फोटो हेरेर यस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यता नेपालमा मोडेलहरु जिब्रै टोक्नुपर्ने फोटो खिचाईराखेका छन्। हेर्नुस्, मलाई कला र अस्लिलताको सिमा छ जस्तो लाग्छैन। सिमा बनाउने भनेको मान्छेको आफ्नो विवेकले हो। मलाई छिः भन्नुपर्ने फोटोशुट गराएको छु जस्तो लाग्दैन।
आम्मै, छैन नि! बल्ल त २४ लागें।
मंसिर लाग्न लाग्यो त?
त्यै त, अब खोज्नुपर्ला।
गायन, मोडेलिङ, डान्स यि सबै कुराहरु सौखका कुराहरुमात्रै हुन् कि तपाँई यसमा सिरियस हुनुहुन्छ?
मैले भनिहालें, शौख त शौख नै हो। तैपनि बेलि डान्सलाई सक्दो निरन्तरता दिने पक्षमा छु। पर्फर्मरको रुपमा मात्रै होईन, ईन्सट्रक्टरको रुपमा पनि।
के छ त फ्यूचर प्लान?
प्लान त अब बिहे गर्ने अनि एक–डेढ दर्जन जति छोराछोरी पाउने हो।....हा.....हा.....हा......जोक्स अ पार्ट! तर सिरियस्ली भन्नुपर्दा केहि बर्षपछि नेपाल नै फर्किन्छु होला। पर्यटन व्यवसायमा हात हाल्ने योजना छ। हेरौं के हुन्छ। अनि नेल आर्टसम्बन्धी कामलाई पनि निरन्तरता दिन्छु।
मान्छेहरू ज्योति मगरलाई हट र सेक्सी गायिकाको रूपमा चिन्छन । तर उनी स्वभिमानि, हक्कि र निडर छिन । भन्..